အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page9| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2.11.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားတွေမှာ ရင်သားကြီးခြင်းကြုံတွေ့ရရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသားများမှာရင်သားကြီးခြင်းကို gynaecomastia လို့ခေါ်ပါတယ...
အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အဆိုးရွားဆုံးကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
24.10.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက် 30 မတိုင်မီမှာတော့ အမျိုးသားတွေဟာ စွမ်းအင်အပြည့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကစပြီး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသလဲ?...
နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဆီနဲ့ သကြားများစွာပါဝင်ခြင်းကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်ပါသလား
21.10.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားတွေအတွက် စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေကြောင့် မျိုးပွားမှုကို ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုး (သို့) မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းတို...
သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသားများအတွက် အကြံပြုချက်
16.10.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားအများစုဟာ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ မိသားစုကိစ္စအဝဝကြောင့် သူတို့ရဲ့ အသက် 40 – 5...
အမျိုးသားများအတွက် ဆရာ၀န်ကိုမေးမြန်းရန် စိုးရွံ့နေတတ်သည့်မေးခွန်း 10 ခု
5.10.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. ကျွန်တော်၏ ေ၀ှးစေ့ (သို့) ကပ်ပယ်အိတ်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာကိုစမ်းမိနေသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသလား?
အမျိုးသားများ ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူရှုမထားသင့်တဲ့ လက္ခဏာ2ခု
3.10.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ပုံမှန်ဆေးစစ်ဖို့ (သို့) ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ခုခုအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ကို ဘယ်တော့မှမနှောင့်နှေးပါနဲ့။ အချို့ရောဂါလက္ခဏာတွေက...
ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းချုပ်ကြပါစို့
28.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရရှိဖို့အတွက် လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်ခြင်း၊ လိင်တံထောင်မတ်တာကို ကြာရှည်စွာထိန်းမထားနိုင်ခြ...
21.9.2016 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
သုတ်ပိုးများအားလုံးသည် အမြဲတစေမျိုးမအောင်နိုင်ပါ။ သင်၏လူနေမှုပုံစံသည် သုတ်ပိုးများကိုမည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့် မျိုးအောင်...